देउखुरीमा सुनखोलीका चारवटा घर पहिरोको जोखिममा – Tulsipur Khabar
देउखुरीमा सुनखोलीका चारवटा घर पहिरोको जोखिममा
August 1, 2020 August 10, 2020 LeaveaComment on देउखुरीमा सुनखोलीका चारवटा घर पहिरोको जोखिममा
गत चारदिन देखिको लगातार वर्षाले लमही नगरपालिका वडा नम्बर ६ छुट्की महरवा निवासी ५० वर्षिय देवमणी चौधरीको खच्चि घर भत्किएको छ । गत सोमबार देखिको लगातार अविरल वर्षातको कारण चौधरीको घर भत्किए पछि उनि विस्थापित हुन पुगेका छन् । गत मंगलवार दिउँसो ३ बजे लगातार वर्षातका कारण घर भत्किएको देवमणी चौधरीले बताए । उनले भने,– ‘घरमा कोही पनि थिएनन् । हामी दुई श्रीमान् श्रीमती खेतमा काम गर्न गएको थियौ । काम सकेर बेलुकी घर फर्कने क्रममा घर नजिकै आउने बित्तिकै अविरल वर्षाले घर लग्यो ।’
‘दिनभरि खेतमा काम गर्दा थकाइ लागेको थियो । काम गरेर घर फर्केर घर नजिकै पुग्दा आफ्नै अगाडि वर्षातले एक्कासि घर भत्किएको हो । घरमा रहेको धान, भाडाकुडा, लुगालत्ता, सबै नष्ट भएको छ । घर भत्किएपछि छोराको घरमा आश्रीय लिएर बसेको छु । अहिले सम्म राहत कहि कतैबाट आएको छैन, चौधरीले भने ।’यता लमही नगरपालिका वडा नम्बर ६ कुलमोहर गाउँ स्तिथ चित्रबहादुर केसीको दुई कठ्ठा खेति योग्य बगरमा पणिरत भएको छ । अर्जुनखोलाको बाढि खेति योग्य जग्गामा पसि जग्गा बगरमा पणिरत भएको हो । जग्गामा लगाइका तिल, बेसार, मकै लगायत अन्य बालिनालि खोलाले बगाएको स्थानीय चित्रबहादुर केसी बताए ।
लमही नगरपालिका वडा नम्बर ४ शान्तिनगरमा पहिरोको जोखिममा परेका पाँच घरलाई जोगाउन अस्थायी तटबन्धको गरिएको छ । प्रदेश सभा सदस्य सांसद रेवतीरमण शर्मा, लमही नगरपालिका नगर प्रमुख कुलबहादुर केसी, वडा अध्यक्ष सुवास न्यौपाने लगायतको संयुक्त पहलमा शान्तीनगरको पहिरोबाट हुन सक्ने सम्भावीत क्षती कम गर्न अस्थायी तटबन्धको काम गरिएको हो ।पहिरोको जोखिममा रहेको वस्तीमा पुगेर अस्थायी तटबन्ध गर्ने कार्यमा खटिएका स्थानीय बासिन्दा, सुरक्षा निकायका जवानहरुलाई हौसला थप्न प्रदेश सभा सदस्य सांसद रेवतीरमण शर्मा र नगर प्रमुख कुलबहादुर केसी तटबन्ध स्थलमै पुगेका ‘यो वस्ती र यहाँका नागरिकलाई सुरक्षीत गर्न अहिले भैरहेको कार्य उपयुक्त छ’शर्माले भने–‘बर्षा सकिएपछी स्थायी तटबन्धको काम थालनी गर्न हामीले पहल लिने छौं ।’ तटबन्ध कार्यमा वडा अध्यक्ष सुवास न्यौपाने समेत आफै खटिनु भएको थियो ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्द रिजाल संगको समन्वयमा सुरक्षा निकायको संयुक्त टोली खटिएको हो । ‘पहिरो झरेर वस्तीमा समेत जोखिम बढेको छ । पहिरोको कारण शान्तिनगर निवासी फर्कबहादुर घर्ती, छुकान चौधरी, देवकुमारी वाठा, यमबहादुर थापा, सौरव अलीको घर पहिराको जोखिममा रहेको टोल विकास संस्थाका अध्यक्ष भरत दुलालले जानकारी दिए । । पहिरो झरेपछी स्थानीय रातभर जाग्राम बस्ने गरेका छन् ।
विपदमा परे मेयरलाई सम्झनुस् !
लमही नगरपालिका नगर प्रमुख कुलबहादुर केसीले अविरल वर्षातको कारणले नेपाल अधिराज्य भरी ठुलो धनजनको क्षेती भएको बताउदै, सम्पूर्ण नगरबासीहरुलाई सर्तकता रहन अपिल गर्नु भएको छ । नगर प्रमुख केसीले भने,–। ‘नेपालमा बाढि पहिरोका कारण ठूलो क्षती भएको छ । लमही नगरपालिका पनि यसबाट अछुतो हुन सकेको छैन । नगर क्षेत्रका विभिन्न स्थान पनि वर्षातका कारण जलमग्न भएको छ । घरहरु बाढि पहिरोले भत्किरहेको अवस्था छ । लगायत विभिन्न किसिमका समस्याहरु उत्पनन भएको छ । यो विपद्का घडीमा असाध्यै सजकताका साथ बसिदिनु होला ।’
कहिकतै केही बाढि पहिरोका कारण समस्या आइलागेमा तुरुन्तै लमही नगरपालिकामा सम्पर्क गर्न समेत अनुरोध गर्दै लमही नगरपालिका नगर प्रमुख कुलबहादुर केसीले आफ्नो मोबाइल नम्बर ९८५७८४२५५५ मा सम्पर्क गर्न सम्पूर्ण नगरबासहीहरुलाई अनुरोध गर्नु भएको छ । ‘यो विपद्को घडीमा हामी सबैले आफु संम्यमीत हुने र आफुलाई चनाखोमा राखेर यो विपद्बाट बच्ने कुरानै महत्वपूर्ण कुरा हो । म सबै नगरबासीहरुलाई यती बेला हामीसंग सम्पर्कमा रहेर बस्न आग्रह गर्दछु ।’
September 8, 2018 June 4, 2019 Tulsipur Khabar
थारु समुदायलाई अट्वारी पर्व मनाउन आग्रह
August 28, 2019 August 29, 2019 Tulsipur Khabar
पातुखोलामा एक हजार मानवबस्ती जोखिममा ! किन दिदैनन् कसैले ध्यान ?
May 19, 2017 May 20, 2017 Tulsipur Khabar